१६ गायक–गायिकाले गाएको देशभक्ति गीत युट्युवमा प्रशंसित[भिडियो]
एउटै गीतमा १६ जना चल्तापुर्जा गायक–गायिकाको स्वर । राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत शब्दहरु । जनतामा राष्ट्रियता उर्लिएको समय । नरुचाइयोस किन ?
चार दिनअघि रिलिज गरिएको ‘मेरो देश नेपाल’ बोलको राष्ट्रिय गीतले युट्युवमा निकै राम्रो भ्यूज र प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । अहिलेसम्म ६ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको गीतमा ३ हजार ६ सयभन्दा बढि प्रतिक्रिया आएका छन् । सबैजसो प्रतिक्रिया सकारात्मक छन् ।
अम्बिका शर्माले कोरेका शब्दहरुलाई अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेका हुन् । गीतमा राजेश पायल राई, प्रमोद खरेल, मेलिना राई, निशान भट्टराई, राजु परियार राज सिग्देलजस्ता चर्चित गायक–गायिकाको स्वर रहेको छ । यसैगरि, कृष्ण काफ्ले अनिता चलाउने, बुद्ध लामा, अस्मिता अधिकारी, समिक्षा अधिकारी, कृष्ण भुजेल, प्रविण भेडवाल र स्वयम् अर्जुन पोखरेलले पनि स्वर भरेका छन् ।
चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता भुषण दाहालको न्यारेसनपछि गीत सुरु हुन्छ । गीतको भिडियोलाई विधान कार्कीले निर्देशन गरेका छन् ।
गायिका अनिता चलाउने यस गीतकी प्रस्तुतकर्ता हुन् । गीतमा आएका प्रतिक्रियाहरुले आफूलाई निकै उत्साहीत बनाएको उनले बताइन् ।
‘यो गीत तयार गर्न मलाई धेरै वरिष्ठ गायक–गायिकाले सहयोग गर्नुभयो । मैले ल्याउन चाहेका केही गायक–गायिका विभिन्न कारणले छुट्नु पनि भएको छ । जे भए पनि गीतलाई दर्शकहरुले रुचाइदिनुभएकोमा सबैप्रति आभारी छु,’ उनले भनिन् ।
अनिताका अनुसार लकडाउनका बेला गायक–गायिकालाई उनीहरुको समय मिलाएर पालैपालो बोलाई भिडियो सुटिङ गरिएको थियो ।अनलाइखबर
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा मृतकको परिवारलाई दाबी भुक्तानी
दैनिक सञ्चार - February 16, 2020 0
डि.बी. बोहरा/महेन्द्रनगर । रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स महेन्द्रगर शाखाले मृतकको परिवारलाई दाबी भुक्तानी गरेको छ । शनिबार बिमीत परिवारको घरमै एक कार्यक्रमका विच इन्स्योरेन्सले भीमदत्त नगरपालिका–२...